Esikhathini ikhabethe ka fashionista weqiniso kumelwe khona kusihlwa ingubo Chic. Kulesi ingubo ezizwa esingenakuphikiswa. Umbuzo ukuthi kuyini ukuba avele emcimbini, lomshado, lokuzalwa, party, Prom, njalo ukhathazekile amantombazane ngaso sonke isikhathi.
Abaklami izindlu fashion emhlabeni wonke sisebenza ngokuzikhandla nge yabo okudaliwe ukulungele-to-bafake. Kodwa, ngaphezu, sinake ukuthuthukiswa iqoqo kusihlwa futhi cocktail izingubo. Ngenxa yemizamo yabo futhi ithalente, izwe imisebenzi emangalisayo zobungcweti. Okunethezeka yesimanje ingubo Abaklami kusimangaze ne ubuhle bayo, zesimanjemanje kanye umusa.
Kusihlwa ingubo kufanele kuvumelane obugagu nokutamasa, ubuhle kanye nesitayela. Yimaphi amanye ngubo Ungakwazi ukuhlobisa sibalo besifazane? Futhi lokho kungaba sengathi intokazi? Unyaka nonyaka, kushintshana Amathrendi ezahlukene imfashini, kwezinye izindawo esikhundleni abanye, kodwa nenhle kusihlwa dress sisabenza futhi funa.
Ayikho isiketi engavamile noma nemfashini trouser Ensemble abakwazi wafaka ukukhanya imigqa evumayo isifazane. Kuphela siyakhazimula ingubo kufaneleka lingadlulisela umsungulo ngalé amajika. Umklamo umqondo omuhle izokwenza lady ezikhangayo futhi sexy ngokuba amehlo besilisa.
ligunya lekukhetsa kabanti
Uma owesifazane ufuna ukuphuma, futhi ngesikhathi esifanayo kukhanye nelokushaya, kubalulekile ukukhetha le njongo langa kusihlwa gown. Kuze kube manje, kukhona lokukhetha zonke, ngisho okuthandwa olindele kunazo.
Ngo amaqoqo eziningi ngokuqinisekile ukwethula nenhle kusihlwa dress phansi. Babehlale ahlale ithandwa kakhulu futhi efiselekayo.
Kukhona onobuhle futhi mfushane flirty nge okhalweni ekhulisayo noma neckline udonsa amehlo esifubeni engenhla, ngemininingwane acacile asymmetry we lokuthunga khulula futhi kufaneleka. Ngokuqondene umbala izintandokazi, kusihlwa izibuko uyojabula ezihlukahlukene imibala yawo, kusuka elikhanyayo, imibala elihlale ukuze iyashintsha iyaphupha ibe shades.
Fashion eshintsha, kodwa isitayela Chic uhlale ethandwa! Gqoka kusihlwa ngokuthi yingenxa kungafaneleka ku izenzakalo ezenzeka ngemva 18,00, futhi kamuva, lapho imali yonke le nkathazo kulo kanye nokunakekela wokugcina wosuku futhi sekuyisikhathi bangabeki nokuzijabulisa.
isinqumo esinzima yokugqoka okunethezeka
Ngu kukhethwa ingubo kufanele ithathwe ngendlela wemfanelo omkhulu, ngoba likhuluma ubunjalo owesifazane, isimo sakhe futhi amazinga okuphila. Vela ku uphawu kusihlwa dress amaphupho iyiphi nomthwebuli. isithombe Abangane abanjalo bangakwenza ungabe ukuheha ukuze ngokwayo ukubukwa eziningi nomdlandla.
Okunethezeka ingubo - uhlobo isiqongo unkosikazi omncane imfashini, emvuthwandaba wako. Leli yithuba eliyingqayizivele ukuze avele yonke inkazimulo yayo. Zonke imibukiso imfashini abaklami abadumile igcwaliswe ukubonakaliswa kusihlwa iqoqo. Efingqa a buciko esiphelele umklami, futhi namanje zibabaza yemisebenzi yakhe emangalisayo yobuciko of lokuthunga.
Yini izindwangu asetshenziselwa
Kusukela kusihlwa dress Chic ezigugile kanini, zingabantu izinguquko esingokwemvelo mancane amathuba imfashini ezingezwakali. Ukuze lokuthunga abazikhethele izinto eqolo futhi ephakeme ukuthi zihlale efanele: i-velvet ngokubabazekayo, nenhle usilika chiffon encane, lace nenhle, lace ebukekayo nezinye izindwangu.
Kodwa isizini entsha ngamunye umemezela imininingwane yayo, kanye fashion imijiva kusihlwa kulo nyaka futhi sinezici ekhethekile. Abaklami basebenzé kahle, futhi bafake design kusihlwa wamangaza ubuhle female ku ukusebenza nekhwalithi kuphela.
Umkhuba kuphela olunesisekelo sibalo lovely futhi ugcizelela isithombe zesifazane esiyingqayizivele. Imibala yendabuko kusihlwa igqoka konke shades of omnyama, osagolide futhi abomvu. Bayakwazi adlulisele obugagu yangempela zesifazane nemvelo, nika imfihlakalo futhi ukhomba ngophakathi.
Black inike abanesikhumba esimhlophe, umbala obomvu ubukeka nje langa. Ububanzi 2016 umbala unwetshiwe futhi kwahambisana by shades oluluhlaza, oluhlaza nesimaragidu, kanye fashion sequins, zethusi, isiliva kanye nomama pearl. brand abadumile Lanvin, Kenzo, Prada sipho kusihlwa dress Chic nge dusting zegolide nezesiliva sequins.
Amamodeli nge imikhono
Le ntombazane kule dress kuyoba okweqanda yangempela futhi kuyozuzisa ukugqama esixukwini. Kuze kube manje, kwakukhona ukuthambekela thunga dress kusihlwa ngaphandle imikhono. Abaklami ukunikela kalula onobuhle amasha nge ezinemikhono emide futhi iDemo. Lokhu ezikubambayo imikhono yashuba, futhi ngesimo ithoshi nokukhanya amaphiko. Ngokuthakazelisayo ibukeka futhi asymmetry.
Ubude imodeli sokuqala
Ubude izihloko, azikho enqabelo: onobuhle wamukelekile futhi short, nezinketho kusihlwa ukuba phansi, okuyinto zakudala. Ladies juqu - kusihlwa igqoka kakhulu okusobala (efana zangaphansi mnene).
Kubo, usebenzisa ukukhanya kakhulu noma okusobala lace impahla, lapho ungabona ubuhle sibalo. Njalo kusihlwa bagqoke owesifazane ungaguqula ngale ukuqashelwa!
Ingabe ngaso sonke isikhathi lesifanele Mantoux test ezinganeni
Umshini kagesi eyakhelwe: nenqubo yokukhetha. Izibuyekezo: esakhelwe ngaphakathi isitofu futhi kuhhavini
Uhlelo lwentela lwaseJalimane. Izimiso nezinhlobo eziyinhloko zokukhokha